IPHEPHA-UKWENZA - China Shandong Yulong cellulose
IPHEPHA-UKWENZA Sodium carboxymethyl cellulose (CMC) kuyinto ephumelelayo kakhulu iphepha ejenti. isixazululo yayo aqueous anezakhi kakhulu ezifana egcina amanzi, ifilimu obumba, ukuzinza, uginindela fibre ziyezwana futhi adhesion, ezivuma iphepha fibre lula ziyezwana, zonke izinhlobo fillers kuthiwa ngokulinganayo kwasakazwa uginindela ngcono ukufana ephepheni. Isicelo ephepheni camera angakwazi ukulawula rheology umgwengwezi futhi ukuhlakazeka lo mbala. Uhlelo enamathela kuyinto ngisho ...
Sodium carboxymethyl cellulose ( CMC ) kuyinto ephumelelayo kakhulu iphepha ejenti. Isixazululo yayo aqueous anezakhi kakhulu ezifana egcina amanzi, ifilimu obumba, ukuzinza, uginindela fibre ziyezwana futhi adhesion, ezivuma iphepha fibre lula ziyezwana, zonke izinhlobo fillers kuthiwa ngokulinganayo kwasakazwa uginindela ngcono ukufana ephepheni.
Isicelo ephepheni camera angakwazi ukulawula rheology umgwengwezi futhi ukuhlakazeka lo mbala. Uhlelo enamathela kuyinto ngisho oqine, luthi alufane abushelelezi futhi isicwebezelisi, futhi okuhle ifilimu ukwakha impahla.
Ngo inqubo ebusweni Sizing, amandla kanye olubushelelezi lephepha kungathuthukiswa, amandla bafake ukumelana, olubushelelezi kanye ebusweni iphepha bayanda, impahla inki ukumuncwa kungathuthukiswa kanye izinga wokunyathelisa kuyathuthuka.
Ngo sizing izicelo, CMC ukuthuthukisa ukungezwani kanye kunenze nisondelane amandla zemicu, futhi sithuthukise amandla futhi ubunzima. Khulisa izinga nokugcinwa izithasiselo ehlukahlukene, fillers yemisipha encane.
Iphepha ukwenza banga CMC onobuhle: PL-5, PL-10, PL-20, PL-30, PL60, PL100
Okulandelayo: Toothpaste Imboni